Paul's Letter to Philemon – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's Letter to Philemon
1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, ary Timoty, ny rahalahy iray, to Philemon, our beloved fellow laborer,
1:3 Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anareo, avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:4 Misaotra an'Andriamanitro, always keeping remembrance of you in my prayers,
1:7 Fa efa hitako nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavana, satria ny fon'ny olona masina efa namelombelona anao, rahalahy.
1:8 Noho io, I ampy matoky ao amin'i Kristy Jesosy handidy anao ny zavatra sasany,
1:9 fa Miangavy anao aho fa tsy, noho ny fitiavana, satria ianao dia be toa an'i Paoly: anti-panahy ankehitriny koa lehilahy sy ny mpifatotra an'i Kristy Jesosy.
1:10 Miangavy anao aho, amin'ny anaran'ny zanako, izay naterako amin'ny gadra, Onesimosy.
1:11 Tamin'ny andro lasa, dia tsy nahasoa anao, fa ankehitriny izy no mahasoa antsika, dia izaho sy ianareo.
1:12 Noho izany dia efa namerina Azy tany amin'i aminao. Enga anie ianao handray azy toy ny fony.
1:13 Izaho te hitana azy amiko, ka dia izy hanompo ahy, ny aminareo, raha Izaho dia ao anatin'ny gadra ny Filazantsara.
1:14 Fa izaho dia vonona ny hanao na inona na inona tsy misy ny torohevitra, mba tsy hampiasa ny asa tsara toy ny hoe avy amin'ny fanerena, fa ny an-tsitrapo.
1:15 Noho izany angamba, avy eo, dia nandao anao noho ny fotoana kelikely, tena mba handray azy indray mandrakizay,
1:16 tsy toy ny mpanompo intsony, fa, eo amin'ny toerana ny mpanompo, dia rahalahy malala indrindra, indrindra fa ho ahy: nefa tena toy izany bebe kokoa ho anao, na amin'ny nofo na amin'ny Tompo!
1:17 Noho izany, raha mihazona ahy ho namana, raiso toa ahy ny ataonao rehefa.
1:18 Fa raha efa ratsy fanahy izay nampijaly anao amin'ny fomba, na raha ao an-trosa, ananarako izany ho ahy.
1:19 I, Paul, efa nanoratra izany amin'ny tanako,: Izaho no hamaly. Ary tsy mila milaza aminao, fa ianao no trosa koa ny tenanao, ho ahy.
1:20 Noho izany dia, rahalahy. Enga anie no sitrako momba anareo ao amin'ny Tompo! Velombelomy ny foko ao amin'i Kristy.
1:21 I have written to you, trusting in your obedience, knowing, koa, that you will do even more than what I say.
1:22 Fa koa, indray mandeha, prepare a lodging for me. For I am hoping, through your prayers, to present myself to you.
1:24 and Mark, Aristarko, Demas, and Luke, my helpers.
1:25 Enga anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho amin'ny fanahinareo. Amen.